Yintoni ephezulu kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 17, 2019 0 IiCententarios 946
Inethiwekhi yoluntu eyaziwayo esetyenziselwa ukufaka iifoto, ividiyo kunye nomxholo omninzi owaziwa ngokuba yi-Instagram, ikuvumela ukuba uphinde upapashe ngokushicilelweyo ngeefilitha zayo ezininzi zasimahla. Ukongeza ekuboniseni yonke into eyabelana nabanye abasebenzisi, Bafuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwi-Instagram yonke imihla. Kwaye ngokuqinisekileyo nawe ungomnye wabo.
Ayisiyombali yeziganeko kunye neendaba kuphela ezinokukubonelela ngesi sicelo, kodwa nangeengxaki ezenzekile eqongeni laso.
Ndingabona ntoni kwi-Instagram?
Ngaphakathi kweli qonga uza kufumana ulwazi oluninzi malunga nabanye abasebenzisi, njengomxholo abalayishayo. Ngokuphathelene noku, banokuba zifoto kunye nevidiyo, babe ngabahlobo, abantu abadumileyo okanye iimpawu aziwayo Yeyiphi oyithandayo kwiimveliso zabo.
Abantu banikezelwe ukuba babone yonke imihla i-Instagram ngokungathi iphephandaba okanye iphephandaba, kuba eneneni kukho ulwazi oluninzi ngendlela yeendaba, Kakhulu kangangokuba ngamanye amaxesha idatha ethile ivela kuqala kwi-Instagram ngaphambili kwenye indlela. Ngenxa yoko, oku kubangela ukuba abantu abaninzi bavuke kwaye into yokuqala abayenzayo ukufaka isicelo okanye into yokugqibela abayenzayo ngalo mhla kukufaka, ukubeka izimvo okanye "ukuthanda" iimpapasho abazijongileyo.
Ukusuka kumxholo osemgangathweni ukuya kumxholo wobuqhetseba unokufumana kule nethiwekhi yentlalo, kodwa inyani kukuba ubamba ukusuka kumzuzu wokuqala ongena kuwo. Kuba ubuchopho bethu buqhubela phambili ulwazi olufumaneka apho ngokukhawuleza, enkosi kwinto yokuba abadali bayo bayenzile ukuze babonwe phantse kwaye akukho kungqubana kwengqwalaselo kwenzekileyo.
Nangona abantu abaninzi besitsho I-Instagram sisicelo esibolekisa ukuba sifunde ukuzithemba kwabantuAbanye bathi yindawo yonxibelelwano kwaye kufuneka yenziwe ukuba ibe mnandi ngazo zonke iindlela. Kodwa inyani kukuba iyalutha kangangokuba izigidi zabasebenzisi zifuna ukufumana abalandeli abaninzi ukuba baqatshelwe kwaye njengophawu lwedijithali.
Zeziphi iingxaki anazo u-Instagram?
Ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwi-Instagram kukwabhekisa kubo izinto ezingalunganga ezivezayo kamva. Ngale ndlela, ngezantsi siza kukubonisa ukuba ungajonga njani ukuba isicelo siphantsi kwaye uqiniseke ukuba ayisiyo ingxaki kwifowuni yakho ephathekayo okanye umphathi wewebhu.
Jonga ukuba ayisoselfowuni
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuyalela ukuba yifowuni yakho ebangela uphazamiso. Ngokuphathelene noku, Jonga ukuba idatha yakho yeselula okanye ye-Wi-Fi yenziwe yasebenza kwifowuni evela kwiiphaneli zokukhetha. Unokuqiniseka ukuba imowudi yenqwelomoya ayisebenzi njengoko oku kuqinisekisa uqhagamshelo kwangoko.
Kwelinye icala, ungenza uvavanyo olulula olunokusetyenziswa kolunye usetyenziso okanye ukuvula isikhangeli sefowuni yakho kunye nokubeka naliphi na iphepha le-Intanethi kwikhangeli yokukhangela. kwimeko apho kungasebenzi Ke ingxaki isenokubangelwa kukugubungela iselfowuni yakho kwaye akuvumeli ukuba usebenzise i-Intanethi. Kodwa ukuba yonke into isebenza ngokuchanekileyo, kuya kufuneka ukhangele kwisicelo se-Instagram.
Jonga ukubona ukuba kwenzeka ntoni kwi-Instagram
Sele sikwindawo apho siye sagweba ingxaki kwifowuni yethu okanye kwi-intanethi. Ukwazi ukuba kwenzeka ntoni ngesicelo singawasebenzisa la maphepha asibonisa imeko yenkonzo, baya kukunceda uphume ngaphandle kwamathandabuzo ngemizuzwana kuba kulula kakhulu ukufunda.
Okokuqala sikunika isisombululo Its ezantsi ngoku, Eli phepha litshekisha ukumisela ubume benye iwebhusayithi okanye isicelo. Ngale ndlela, ngaphakathi kuyo uya kubona igama le-Instagram, i-URL yalo, imeko kunye nexesha lokuphendula. Kodwa kuya kufuneka ujonge ukuba igama "UP" livela luhlaza kunye ne-Instagram caption ebonisa ukuba iqonga liyasebenza.
Ngezantsi nje kwentsomi esisele siyichazile, imivalo eblowu kufuneka ivele nexesha lokuphendula, ngelixa ixesha lisezantsi libonisa ukuba kungcono ukusebenza. Nangona kunjalo, ukuba le mivalo ayifumanekanga, kuthetha ukuba i-Instagram iphantsi, kufuneka ulinde ukuba bavele kwakhona ukuqinisekisa ukuba i-interface ibuyele kwinto eqhelekileyo.
Elinye iphepha elirekhodayo iingxelo zomsebenzisi Udweliso olusezantsi, iya kuvela ngokuvela kwenani leengxelo. Kodwa ukuba ubona nayiphi na incopho ephezulu kwigrafu eboniswe kwiscreen sakho unokuyitolika njengoko i-Instagram inoluhlobo oluthile lweengxaki.
Nje ukuba ugqibe kwelokuba isicelo sivelisa iingxaki, unokufumana iqhosha elibomvu ngaphantsi kwegrafu, onokuthi uxele ukusilela kulo.
Kwenzeka ntoni kwi-Instagram kunye nokusilela kwayo?
Xa esi sicelo siwela okokuqala sikwenza oko kunye WhatsApp y Facebook, akukho xesha bayekayo ukusebenza ngokupheleleyo, kodwa bekukho iingxaki zokufaka iifoto, kunye nokutshintshiselana imiyalezo ngqo. Kwenzeka ngokufanayo nakwezinye iinethiwekhi zentlalo, olu luhlu lwezinto ezinqumlayo ezichaphazelekileyo kubasebenzisi benkampani yeMark Zuckerberg, Umbuzo ngowokuba kutheni yenzekile?
Nangona kwasekuqaleni kwakucingelwa ukuba yayilusuku lokuhlaselwa kwe-DDos kule nkampani, lalelwa ukuba inokuba lukhona uhlaselo olunje. Kuyabonakala kwakhona ukuba umonakalo owenziwe yi-DDos awuyi kuba yinto ebonwa kakuhle ngabatyali-mali Kwaye ngokuqinisekileyo kungonakalisa igama le-Instagram, lethiyori yagcinwa kuba bayathemba ukuba isenokuba licebo lokukhanyela umncedisi.
Kwelinye icala, ikwatsala ingqalelo, ukuba izicelo azizange ziyeke ukusebenza ngokupheleleyo, kodwa kuphela yimisebenzi ethile yazo. Kungenxa yoko inkampani kaMark Zuckerberg ikwazile ukuphelisa amathandabuzo, ngelixa ndicacisa ukuba lolunye uhlobo lwengxaki yokubamba ixesha. Kwaye ngale nto sithetha ukuba bacacisa ukuba yinguqu kulungelelwaniso lweeseva kwaye ezibangele ingxaki nganye yezobuchwephesha.
Iingxaki ngamabali e-Instagram
Ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwi-Instagram kunye neempazamo zayo zobugcisa kuyabonakaliswa kwingxaki yakhe yakutshanje, xa ndichitha iiyure ezingaphezu kwe-8 apho abasebenzisi bayo bengekakwazi nokulayisha amabali okanye ukulayisha izinto zabanye abantu.
Iingxelo zale mpazamo zafunyanwa ngokukhawuleza ngelixa abantu kwihlabathi liphela abasebenzisa esi sicelo belinde impendulo. Kodwa ngokuqinisekileyo kwafunyaniswa ukuba le mpazamo ibangelwa ziingxaki zobugcisa yeqonga elibangelwe lutshintsho kwenye yamaseva alo, elinxulumene nokuphendula kwamabali.
Kwenzeka ntoni kwi-Instagram kunye neengxaki zayo xa zingavuli
Sele ibonakalisiwe kangangezihlandlo ezininzi ukuba iqonga libonise ukusilela xa lingena kuyo, abasebenzisi abaninzi bacinga ukuba yingxaki ye-Intanethi yabo kodwa yeyona nto iphambili kwezobuchwephesha ukuba inkampani ibisingatha kumaseva ayo. Nangona kunjalo abaninzi bayayikhaba le kwaye bayangqina ukuba bahlasela kwi-firm abangakhange bakwazi ukuphepha okanye ukusombulula kwangoko. Yonke le nto ibangela umonakalo, ihlazisa le nkampani idumileyo.
Yintoni ekufuneka uyenze xa i-Instagram iphantsi?
Akukho kuninzi ekufuneka kwenziwe kodwa linda ukusombulula iingxaki ezikhoyo zesicelo. Kodwa xa usenza uhlobo oluthile lwengxelo Unganceda ukukhawulezisa inkqubo oya kuthi uxhamle kuyo.
Sukuzama ukucima isicelo kwaye uphinde ukhuphele kwakhona, le ayisiyiyo into ekufuneka uyenzile kwaye ayizukuyisombulula ingxaki, kuba iyinto ebalekayo ezandleni zabasebenzisi. Kodwa ukuba unako zama ukungena nangaliphi na ixesha xa ubona ukuba bayisombulule ingxaki kwaye wazise abanye abantu xa inkonzo ibuyiselwe eqongeni.
Ngelixa inkampani ephethe i-Instagram, i-Facebook ne-WhatsApp zithathela ingqalelo ukubonelela ngexesha ngalinye uphuculo ngakumbi kunye nezinto ezintsha kwiinkonzo zabo kwaye banceda uluntu lonke Iyenza ukusetyenziswa kwezicelo zayo. Phakathi kwabo singanakho ukuqaphela ukuba unyaka nonyaka baqhuba inkqubo yokusebenzisa amaqonga abo ngelixa bebenza ngakumbi nangokonwabisa.
Ngesi sizathu, izigidi zabasebenzisi zongezwa rhoqo ngonyaka kwi-Instagram abathi ngaphandle kweentsilelo zakutsha nje baye bakwazi ukusombulula ngokukhawuleza kwaye oku akuchaphazelekanga nayiphi na iakhawunti, ngenxa yokuba uhlobo oluthile lolwazi luzakususwa. Ngapha koko, ukhuseleko oluboniswe leli qonga liqinisekisile inkonzo entle ayinikezelayo kubo bonke abantu abayisebenzisayo imihla ngemihla kwaye bayicwangcise njengeyona yesibini kunye neyona nto ibalulekileyo kwinethiwekhi yoluntu eyaziwayo emva kogebenga lwe-Facebook.
Olu lwazi luqulunqwa xa isifundo senziweyo kwenziwa rhoqo ngonyaka kwaye iziphumo zibonisa ukuba kususela ekusungulweni kwayo kwi-2010, I-Instagram iphindaphindeka abasebenzisi bayo rhoqo ngenyanga kwaye ngaphandle kwemida. Oku kuqinisekisa ukuzibophelela kwakho kunye nabantu abayisebenzisayo.
1 Ndingabona ntoni kwi-Instagram?
2 Zeziphi iingxaki anazo u-Instagram?
2.1 Jonga ukuba ayisoselfowuni
2.2 Jonga ukubona ukuba kwenzeka ntoni kwi-Instagram
3 Kwenzeka ntoni kwi-Instagram kunye nokusilela kwayo?
3.1 Iingxaki ngamabali e-Instagram
3.2 Kwenzeka ntoni kwi-Instagram kunye neengxaki zayo xa zingavuli
4 Yintoni ekufuneka uyenze xa i-Instagram iphantsi?
I-Instagram ikunika nini ikhreythi eluhlaza okwesibhakabhaka?